Iyo iPhone 6 inoenderera ichikuvadza Samsung | IPhone nhau
Kupfuura zuro, Samsung yakaratidza kudzoka kwemambure kwekota yekutanga yezvemari yegore rino 2015 nenhau dzakaipa (kana tichigona kunzwisisa nekuwana zvakaipa mabhiriyoni ema euro). Samsung Electronics yakazivisa purofiti ingangoita madhora zviuru zvina mazana mana nemakumi mana nemazana matatu emabhiriyoni Nekudaro, izvi zvinomiririra 4.350% kudonha mumumbure purofiti yegore rimwe chetero mugore rapfuura, uye zvinoita sekunge kudonha kwenhamba yavo kuri nekuda kwekubudirira kweiyo iPhone 39.
Izvo zvinopfuura pachena kuti iyo iPhone 6 ndeye foni yakaita kukuvadza kwakawanda kumakambani ane mafoni ekumusoro-soro paApple, chikonzero chiri nyore kwazvo, saizi yechidzitiro. Paive nenhamba yakati wandei yevashandisi avo chete chikonzero chekusayedza maapuro saizi yaive saizi yechiratidziro, iyo iyo Android mireza yakatsaurirwa kupa nehukuru hwakakura uye zvisarudzo kupfuura muganho wepfungwa dzinobatsira. Asi ipapo iyo iPhone 6 yakasvika, iine 4,7 inches, yakagadzirira kusvika muchanza cheruoko rweanonyanya kudhiraira nehukuru.
Kunyangwe, zvirinani sekufunga kwangu, ivo Android vatama vasvika panguva yakaipisisa (kana padyo), iOS haisi kana mumvuri wezvainomiririra, yakarongedzwa system isina kukundikana. Kunyangwe, izvozvi zvinopa akateedzana emabasa uye hunhu hwaingo goneka kare kana isu taive naJailbreak uye yakaitwa kubva iOS 7 kupfuura shanduko yemavara mune yakajeka graphical. Apple inovimbisa sisitimu mune yakachena iOS 6 maitiro maererano nemaitiro eIOS 9, uye pasina kupokana, avo vasina kungosvika ndizvo zvatinotarisira.
Iyo iPhone 6 haisi yekungobudirira chete mukutengesa, asiwo denda kune vanokwikwidza, kunyanya avo vanopa mafoni ekupedzisira-ekupedzisira., Ndivo vari kukanganiswa nekutengesa kukuru kwazviri, nekuti ivo vari kuzvitonga vega uye nevateereri chete. Zvingave zvisina musoro kutaura kuti iyo iPhone 6 inogona kunge iri kutora chikamu chemusika chezasi-kumagumo Microsoft Lumia semuenzaniso.
Kunyangwe paine nhoroondo dzemari dzichangoburwa, Samsung ine rutendo rwakawanda mu "bluish" (bata irony) kumucheto kweSamsung Galaxy S6 uye S6 Edge kuratidza, uye inotarisira kuvandudza idzi nhamba zvakanyanya mukota inotevera. Kunyangwe isu tisingakanganwe, ndiani anochengetedza kugadzikana kwekambani kuri kuve, vakati voga, ndiko kuwedzera kwekutengeswa kwepakati-renhare mbozha, kunyanya iyo Galaxy A Series.
Vaongorori vanodavira kuti Samsung yakatengesa mafoni emamiriyoni mazana masere nemazana masere nematatu mukota yekutanga, nepo Apple yakatengesa mamirioni 83,2. Mune huwandu huwandu tinogona kunyengerwa neiyo Samsung manhamba, asi isu tinofanirwa kuziva kuti ivo vane akasiyana-siyana maseturu, kubva pakadzika kwazvo, sezvakaitika neGPS Ace muzuva rayo iyo yaitengeswa kunge hotcakes uye iyo yakapa ruzivo rwevashandisi rwakakodzera Symbian.
Sezvatichangobva kutaura, nhamba yepamusoro yekutengesa iyo Samsung yasara inobvumira kuti iwanezve zita remugadziri mukuru we smartphone, zvisinei, mazhinji acho anotengesa anomiririra mafoni ane mutengo wepakati uye kwete zvigadzirwa zvemureza, kurasikirwa nepundutso zvakanyanya. Saka wadii wazvitaura, iyo iPhone 6 uye yayo yekuwedzera screen yakave kurova kukuru kuSamsung, ichikwikwidza kekutanga muhukuru hwechiso pakati peiyo iPhone neGPS.
Pasina kupokana, kudiwa kweiyo Galaxy S6 Edge kwave kwakakwirira, asi mushure mekucherechedza matambudziko ebhuruu emayo skrini uye muganho wemasheya ini handingave netariro sevabati veSamsung.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Iyo iPhone 6 inoramba ichikuvadza Samsung
bhuruu? zvinorevei izvo? : l
Ini handinzwisise chinhu, ndeyekuti iyo S6 ichangobuda uye ivo vari kutotaura kuti iPhone inotengesa zvimwe uye ini handizive chii? Damn ndedzipi nzira dzekutsvaga gakava, zviri pachena kuti iyo iPhone 6 ine zvirinani kuita kweiyo iOS ... asi kwandiri mu Hardware iyo iPhone 6 haina kunaka, iyo kamera yangu yeiyo iPhone 6 haina kunyatso kuenzaniswa neiyo Z3 S6 kana HTC M9… .. Makore akareruka
Vazhinji vanhu vanotenga iphone nechiratidzo uye havazive kuti Apple mhando ndeyei. chingotenga nekuti apple inotonhorera !! Chero ani anotenga android anozvitenga chete nekuti ivo vanongofanana nemodel.
Ini zvechokwadi handitombotakurwi nezvinotengeswa nemhando yechiratidzo kana kwete, ini ndinogara ndichisarudza zvandinoda zvakanyanya, chero chiri chiratidzo.
Ndakave neese iPhone kunze kweiyo 6, kubva kwekutanga kusvika pa5S, uye ini ndichamirira ne5S kusvika Apple yaita yakanaka iPhone, nekuti iyo 6 kwandiri pachangu haisi iyo yazvinofanira kuva, kana zvisiri, kumirira iyo 6S iwe uchaona kuti Zvichava sooooo zvakanyanya nani ...
Alba, sveta pandiri 😉
Iye akataura zvirinani chimwe chinhu chinogadzira uye achitsanangura zvikonzero zvake, chimwe chinhu chakanetsa kuona mune zvakataurwa pane ino webhusaiti. Pamwe iwe unofanirwa kuenda kunze uko kunotsvaga chekuyamwa futi, saka unozvivaraidza iwe nechimwe chinhu uye uchisiya zvisina musoro zvirevo.
Alba, unoziva here kuti ndiani anoita iyo IPHONE ...? Kamera ndeyani? Iyo processor ndeyani? Zvinhu zvaani? Mune zvishoma zvishoma skrini zveiPhones nyowani, angave ani? Ndatenga iyo IPHONE 6 nekuti ndinonzwa sekuti haisi nekuti inotonhorera, ine giga uye maviri macores ndine zvakawanda zvinokwana pane zvandinoda, asphalt 8, yazvino kurwa 5 nezvimwe, ini handidi 8 cores yandinonzwisisa kuti inovandudza magirafu uye hapana chinopisa, asi ngatifungei Samsung yaburitsa girazi nharembozha uye nemupendero nechakakomberedzwa skrini iyo chokwadi ndechekuti handizive basa rei hahahaha rinofanira kuisa maapplication uye rinofanira kutsvedza kubvisa ivo ini ndinofarira kuva navo pachiratidziri, apo Apple Inoburitsa iyo IPHONE 7 kana 8 kana pese paunoda kuiburitsa, ndinovimba unoiburitsa mugirazi senge IPHONE 4 \_ 4s uye yakakomberedzwa skrini, kwaziso kune vese!
Zvinotaridza kwandiri kuti zvakataurwa naAlba zvinopfuura chokwadi. Haana kumbotaura chero nguva kuti izvo zvikamu zveiyo iPhone zvinogadzirwa neApple pachayo, kana kuti MUNHU Wese anotenga iPhone haadaro nekuti imafashoni (saka handinzwisise kuti sei wagumburwa), asi zvinopfuura pachena kuti vanopfuura hafu yevanhu vanozviitira izvo. Ini ndinopokana kuti zvachose vanhu vese (pachokwadi, ini ndaizoisa ruoko rwavo mumoto ndichiti vanopfuura hafu yevanhu) vanosarudza iPhone kune Android kana WP chishandiso inongori nekuda kwechiratidzo, nekuti inozivikanwa uye inoparadzirwa nepasi rese. Wepakati mushandisi we mobile haawanzo kana kuziva nezve hunyanzvi maratidziro eiyo terminal yaanoda kutenga, iye anongotsvaga iyo yaanoona yakakodzera muhupfumi hwake (pasina kuve prehistoric).
JS JS akadaro
Unogona kuburitsa yakanakisa Android foni isina kuenzana neApple !!
Pindura JS JS
Arnanz, Anna akadaro
Iva nechokwadi, Samsung haizombovi apple.
Pindura Arnanz, Anna
Hapana munhu Perez akadaro
Sekuru Apple ichagara iri pamusoro peSamsung
Pindura Hakuna Munhu Perez
Alba, enda unoona TV kuti vanokanda mukomana wemombe hahaha, asina mhosva
Nicolas Pedroche anochengeta mufananidzo akadaro
Zvaive zvichitarisirwa ini ❤️ APPLE
Pindura Nicolas Pedroche
Mauricio Alvarado akadaro
Iko kufungidzira kwakadii kwevagadziri veSamsung!
Pindura Mauricio Alvarado
Iko kufunga kunochengetwa nevakagadziri veiyo 6 Plus, kazhinji shangu, inenge isiri Tablet.
Uye ndosaka vaburitsa maviri mamodheru e iPhone 2 kune avo vasingade yakakura kudaro ... saka ini handioni dambudziko kwese kwese.
Ricardo Flores chinobata mufananidzo akadaro
Iyo fluidity uye kugadzikana kweIOS 6 yakashaikwa.
Pindura Ricardo Flores
Gadiel Santos akadaro
Zvakanaka, ini ndine iPhone 6 pamwe, uye ini ndato suwa rusununguko rweApple
Pindura kuna Gadiel Santos
Carlos Sandoval akadaro
Mirira jailbreak ……
Pindura Carlos Sandoval
Ini ndinofunga kune vazhinji pano vasinganzwisise kuti Samsung haisi yekuvandudza yeApple. Izvo zvikamu zveiyo Android foni hazvina kugadzirwa neGoogle. Muka kubva kuhope idzodzo. Andrid ndiyo yeGOOGLE inoshanda. Uye Samsung inotakura google inoshanda sisitimu pane yayo smartphone. Naizvozvo, iyi nharo yakapusa yekuti izvo zvikamu zveiyo iPhone hazvisi kubva kuApple hazvibvumirwe kuve uchisimbisa. Yese mafoni efoni ane zvikamu kubva kumakambani akasiyana. Nhasi, hapana munhu ane nhare mbozha, Laptop kana Desktop izvo zvikamu zvavo zvinobva kukambani imwe chete. MUKA!
Uye uchiri kutevedzera modhi ye iphone 6
Pandakaona iwo akakomberedzwa mativi eiyo iPhone 6, ndakaona kuti yaive cheeky kopi yeSamsung Ativ S kubva 2012.
Ndiani anoteedzera ani?
Dzese dzakateedzerwa pamwe chete, hazvina musoro kuita nharo 'ndiani ane hombe. Uye chero munhu anoita anonyanyisa uye anofanira kuvaita kuti vatarise.
Zviripachena kuti iyo iPhone 6 ndiyo yakanakisa yemhando yepamusoro uye kwete kunyange akadhura makopi seS6 anowana kunyangwe pokito hahahaha
Ichokwadi ndechekuti Android lollipop iri nani kupfuura ios ... Ini ndinoda Iphone 6 ... Asi ... ndine Nexus 5 yakanaka ... ini ndinomirira kuti ndione zvinoitika gore rino neiyo nyowani Iphone 6S kana 7.
Pindura kuna chriss
Vamwe vanogona kuzvishandisa zvakanaka kuti vaone zvimwe zvinhu nechidiki chekutarisa, hazvina kunaka kuve fan fan yechiratidzo, iyo seyese iri kure nekukwana. Iwe unofanirwa kuve nechinangwa, hapana mugadziri ane masikirini anouya padhuze neakanyanya kugamuchirwa, ayo asingamiri kupa zvidzidzo modhi mushure me modhi (kusanganisira iyo iPhone), kana kuti iyo kamera iri nani pane iyo yeiyo g4, iyo iri kusiira zvimwe zvese mukati humbowo hwevanogadzira nehurefu hwayo hwe 1.8 (kusanganisira iphone 6 kuwedzera). Lollipop yakachinja zvakanyanya Android zvekuti hapasisina lag kunyangwe mune moto e. Chinhu chega chega chine zvakwakanakira icho munhu wese chaanofanirwa kukoshesa, pa Android inzvimbo yacho hombe muSpanish yeHTC mania uye xda pasi rese, ndapota usaenda kwandiri kunorumbidza kuparara kwetirongo nerusununguko rweApple nekuti zvinoseka zvachose, uye kana iwe funga kuti ndiko, hauzive chinonzi Android uye hauna kunetsekana nekuziva kugona kwayo; muiyo ios ndiko kusununguka kwekushandisa, handikwanise kufunga nezvakawanda, uye chimwe chezve chikonzero chekuti Android yakaipa haina kukosha ...
Mhedziso yekuti ini ndiri kutenderedza matavi hehe, iwe unofanirwa kuziva maitiro ekuona kuti ndezvipi zvinhu zviripo kupfuura block, izvo zvakawanda uye nekugona kwangu (maonero angu), uye chinyorwa hachifarire chero chinangwa, zvishoma pane ese makomendi.
Vanondisekesa mundiudze zvinobuda kana ukateedzera htc imwe m8 uye galaxy note mmmm zveshuwa iphone note6 aya mareports anobva ku galaxy s6 edge isati yatengeswa uye kana usingazive apple richazotora kunze iphone ine skrini pamativi uye Chii chavari kuzotaura zvechokwadi Apple yakazvigadzira uye ndichavaona nekukurumidza mutauri achidonha kupfuura akaremara uye nezvechiratidziro zvinoenderana nechiratidziro chematte chandisina chokwadi kuti vanoziva zvazviri, zvinovimbisa kuti girazi renyeredzi s6 kumucheto ndiyo yakanakisa zvisinei nekuti vakabvunza zvakadii kuti varege kurota kumucheto kuri kukurumidza kamera iri mudiki zviri nani kuzvigamuchira ivo vakarasika vanoziva kurasikirwa
Kukuvara kweSamsung kunoitwa nemamwe ese maAndroid makambani, kunyanya izvozvi nekuti makambani eChinese ari kubuda nemitengo yakanaka kwazvo, ramba uchinakidzwa neapuro ndicho chinhu chete chauri kugona kuwona.
Vanobvumirana zvachose Fran, Samsung uye kambani zvakamisikidzwa nechimhuka chiri kuuya, uye chinonzi xiaomi, kwete Apple nekuda kwamwari hahaha.
Vazhinji pano vanodzivirira ini handizive kuti kugadzikana kwakazara, ndine shamwari ine iyo iPhone 6 uye yangu g2 ine 12 cm haina chekugodora kune fluidity yeiyo iPhone.
Izvo zvinonzi ios yarasikirwa nehunyoro, izvo zvinoitika kana vaine nyore os uye iwe uchida kuita kuti itaridzike senge Android mukuita basa, unoimenya iyo, kana ukasatarisa kuti Apple yakaunza sei SwiftKey (yakakurumbira keyboard mu Android), iyo keyboard iri pamusoro kupfuura iyo imwe iPhone, havagone kuitora kuti iende pasina zvikanganiso ...
Misael Lopez akadaro
Iwe haugone kuenzanisa mhando neIphone, nekuti IOS ndeyekwavo chete, pachinzvimbo Android isingaperi isingaverengeke nezviuru zvezvingaitika uye zvakasiyana, ine akasiyana mabhureki uye mamodheru ane mabhajeti emumwe nemumwe mushandisi wezvese uye nezvinodiwa nemumwe nemumwe Pa rimwe divi, Apple inongokupa mashoma sarudzo mumutengo uye dhizaini.
Pindura Misael López
Nguva imwe neimwe imwe nguva ini ndinoona iri peji uye ndoseka makomendi kubva kuApple fanboys hahahahaha ...
Patrick Wayne akadaro
Zvakanaka ndinofunga kuti nguva zhinji iyo iPhone yakapfuura android, asi ndichitarisa kumamwe makomendi ini ndinoona kuti munhu wega wega ane pfungwa dzakasiyana maererano neapuro, ini pachangu ndakave neruzivo rwakanaka neiyo iPhone 6, asi pane chimwe chinhu Chiri kushaikwa kuve mukuru. Dai mabasa esteve anga asina kufa, zvese zvaizosiyana. Kune vamwe Apple chinhu chekuziva nacho (Ini ndakadaro), kushanda kuApple kwave kuri kukuru. Kune vamwe chingori chiratidzo uye kuva nemari. isu tinorangarira chinhu chimwe Samsung Uye hachisi icho chakashata zvachose, chimwe chinhu chakanaka kuve nacho mune zvese. Kurarama pane iyo iPhone ndinovimba unowana chimwe chinhu chinogadzira uye chinonzwisisika sepakutanga. Kwaziso kune vese.
Pindura kuna Patrick Wayne
Ngatione kana Apple ichiburitsa TV haha ​​nekuti isu hatizive maitiro ekuita chero chinhu kunze kwenhare mbozha uye malaptop Uye kuti ivo vanoita kamera yakakodzera mutengo wayo (IPhone 6, iPhone 6 plus)
Saka mupengo wega wega neupengo hwake
martial acosta akadaro
Samsung inopa zana kukanda kuFoni zvirinani kuramba mvura porvo nemabhomba kuna Mwari vanhu vangani vakavhiringidzika ndinonzwa tsitsi? Nyika ino .... kune vanhu vanogara vakavhiringidzika uye vakasuwa
Pindura kune marcial acosta
Mukupedzisira zvinoenderana nemushandisi wega wega, kana iwe uchida kushandisa IOS iwe hauna imwe sarudzo kunze kwekushandisa iyo IPhone, asi kana ukasarudza Android uchave nezvakasiyana izvo apuro risingakwanise kukupa, kwandiri ini android iri nani zvakanyanya nekuda kwe kuita kwakawanda kwazvinoita, zvese musoftware, Hardware, dhizaini nemitengo. Iwe unogona kutenga yepamusoro-kumagumo usina kana kutengesa nhengo.
Ndakave nezvose uye sarudza sansung. Iwe unogona kuita zvese pasina yakawanda protocol uye zvipingaidzo. Mafirimu, nziyo, mitambo, kuverenga, unogona kudhawunirodha nekuita chero chaunoda… neiyo iPhone iwe unogona chete kuita izvo zvavanokutendera kuti uite uye kwandiri zvinoita sekunge hazvisi chinhu…
Peji rakatsaurwa kune apple uye kuti ivo vanoshandisa iro izwi samsung (kwete chaizvo chaizvo) handizive kuti nei zvisingandishamise.
Ndakatenga iyo Iphone 6S plus uye ndinoshamiswa nekushomeka kweiyo sisitimu yekushandisa. Zvese zvinoda matanho mazhinji. Haikwanise kuenzaniswa. Ini ndaive mumwe weavo vakazvitenga nekuda kwechiratidzo uye nekuti ndakaenda kune aplle uye zvese zvaitaridzika kuva zvakanaka kwandiri. Android yakatendeseka zvakanyanya kuita uye nekukurumidza seIos. Vhotera Android
IOS uye Android apps, ikozvino paWindows 10